सेक्सको बारेमा एक दिनमा कति पटक सोच्छन् महिला !
एक जना पुरुषले एक दिनमा सेक्सको बारेमा ३४ पटक सोच्छन् भन्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ । पुरुषले एक दिनमा ३४ पटक सोच्छन् भने प्रश्न उठ्छ, महिलाको आखिर महिलाले एक दिनमा कति पटक सेक्सको बारेमा सोच्छन् ? एक पटक, दुई पटक वा प्रत्येक घण्टा ?
यो सबै सोचकोविरुद्ध महिलाले पनि सेक्सको बारेमा त्यति नै पटक
अब स्वास्थ्य चौकीमै मृगौला परीक्षण
काठमाडाैं l सरकारले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमै मृगौला परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।
मृगौला परीक्षणमा प्रयोग हुने ‘डिपिस्टिक फिट’ मनाङबाहेकका जिल्लामा पठाइसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाले देशभर पहिलो चरणमा २० लाख जनाको मृगौला
सातामा चारपटक सेक्स गर्नुस् जवानै रहनुस्
एजेन्सी । हालै गरिएको एउटा सेक्स्युअल हेल्थ सर्भेका अनुसार अधिकांश महिला यौन आनन्द लिदैनन्। यो सर्भेका अनुसार महिलाहरु यौन आनन्दका लागि होइन, उनीहरुका लागि यो एउटा ‘सम्झौता’ हुने गरेको छ।
हेल्दी विमेन नामक संगठनले १ हजार ३१ महिलाको सेक्ससँग सम्बन्धित व्यवहारको अध्ययन गरेको थियो। सर्भेमा
गरामनीमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटन
गरामनी । टोलटोलमा स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ झापाको गरामनीमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको आज उद्घाटन गरिएको छ ।
जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाले गरामनी ९ स्थित तेलकानीमा एक कार्यक्रमका बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटन गरेको हो ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका
दमकमा डेंङ्गुको महामारी फैलने सन्त्रास, ६० बढीलाई संक्रमण पुष्टि
डेङ्गु रोगका कारण आइतबारसम्ममा तीन स्वास्थ्यकर्मी एक पत्रकारसहित ६० जना बिरामी बनेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार लाइफलाइन अस्पताल दमकका मेडिकल
२ वर्षदेखि परिचरको भरमा हेल्थपोस्ट
पर्साको घोडदौड पिपरा ८ लक्ष्मीपुरमा रहेको स्वास्थ्थ चौकी २ वर्षदेखि परिचरको भरमा चलिरहेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ।
हेल्थपोस्टमा एक जना हेल्थ अस्ष्टिेन्ट एचए, ३ जना अहेव , दुइ जना अनमी र एक जना परिचर गरी ७ कर्मचारीको दरबन्दी छ।
तर २ वर्षदेखि परिचर सुरेश राउत कुर्मीकै भरमा
कसरि गर्ने लामो समय सेक्स !
काठमाडौँ l अब सरकारी अस्पतालमा आफ्नो छुट्टै फार्मेसी ९औषधि पसल० सञ्चालनमा आउने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा अस्पताल आफैँले फार्मेसी सञ्चालनका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेर पठाएपछि सरकार मातहतका अस्पतालले अनिवार्य रूपमा फार्मेसी सञ्चालन गर्नैपर्ने हुन्छ । यसअघि सर्वोच्च
झापा । पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मात्र होइन, बाँच्नकै लागि पनि अत्यावश्यक हुन्छ । तर त्यहीँ जीवनदायिनी पानी आवश्यकताभन्दा बढी पिइयो भने त्यसले स्वास्थ्यमा ठूलो नकारात्मक असर पार्ने रहेछ भन्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
शोधकर्ताहरुका अनुसार शरीरलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी पानी पिउनाले
स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीति नगरौंः मन्त्री थापा
धुलाबारी । स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले ज्यामिरगढी स्वास्थ्य चौकी भवनको शुक्रबार उद्घाटन गरेका छन् ।
सरकारको सहरी विकास योजनाअन्तर्गत एक करोड ३४ लाख ७५ हजारको लागतमा नौ कोठे सो स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण गरिएको निर्माण समितिले जनाएको छ ।
भवन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री